Lasan’ny mpangalatra tsy fantatra ny kitapon’ny delegasiona sinoa izay isan’ny nandray anjara tamin’ny fihaonam-be. Vao lasa ny praiminisitra rehefa avy nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ny raharaha dia nosavaina ny olona tao. Henatra lehibe ho an’ny mpampiantrano ny toy izany ary nampidina avy hatrany ny lazan’i Madagasikara.
Lehilahy iray no namono tena tao anatin’ny fanadihadiana izay nataon’ny polisy tany Ambanja. Nitondra antsy an-tsokosoko tao anatin’ny kitapony izy. Rehefa vita ny fanadihadiana azy ka azo heverina fa tsy afaka izy dia naleony notsindromina avy hatrany teny amin’ny fony ilay zava-maranitra. Nezahina navotàna ny ain’ilay lehilahy saingy nandamoka. Resaka fisolokiana lavanila iray taonina ny raharaha izay nahasaringotra azy. Nijanona hatreo izany ny fanenjehana azy. Tsy misy afa tsy izay ve ny fomba niarovana ny tenany ?
Nihena iray indray ny tarika ny Nanahary. Nodimandry omaly alarobia 06 novambra teo amin’ny faha-78 taonany i Jacques, faralahy amin’ny tarika. Eny amin’ny tranony eny Soavimasoandro ny razana ary mety hoentina eny amin’ny tranon-drazany eny Anosipatrana. Tamin’ny 26 jona 1941 no teraka ny lehilahy.
NAIDITRA AM-PONJA ILAY MPAMILY KAMIAO
Naiditra am-ponja vonjimaika ilay mpamily kamiao izay nandona ka nahafaty zazavavikely mpianatra tetsy Tsaramasay. Maty tsy tsa-drano ilay zazakely izay avy nianatra ka nandeha an-tongotra hody raha hiverenana kely. Ny tranga toy itony dia mbola manaporofo hatrany fa tsy mety milamina ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra ary mamono olona saika isan’andro. Mihakely hatrany ny làlana noho ny fisian’ny mpivarotra an-tsisin-dàlana moa ny fiara koa tsy mitsaha-mitombo. Mikorontana tanteraka ary lasa mamono olona.
Mitohy hatrany ny fanaon’ny filoha Rajoelina manambitamby amin’ny fitaovana kely na sakafo kelytoy ny nitranga omaly tetsy Ambodirano Ampefiloha ary nandraisany an-tànana ny fitaovan-tsekolin’ny mpianatra sasany. Hatreto aloha dia tsy misy vahaolana maharitra fa izay tsirambin’ny tanana fotsiny. Ohatr’izany koa ny momba ireo voafonja vitsy izay nomena fahafahana kanefa misy an’arivony izay mila alefa amin’izay ny fitsarana azy ireo. Vahaolana manambitamby mba entina hisehosehoana fotsiny hatreto no tena mibahana amin’ny fitantànana ny firenena.